Semalt: The Mirai (DDoS) Usoro Usoro na Otu esi egbochi ya
Mgbe mmepe nke koodu eji mepụta nnukwu mbanye anataghị ikike online, Artem Abgarian, The Ọkachamara Onye isi na-akwado ahịa na-akwado, anyị kwenyere na anyị nọ na mbido nke mwakpo ndị ọzọ na ntanetị. Ndị mmepe nke koodu a haziriọ na-etinye aka na ngwaọrụ ndị ejikọtara na-enweghị nchebe. Ndị dị otú ahụ na-agụnye igwefoto, ụzọ ntanetị, igwe na ngwaọrụ ndị ọzọ. Usoro ahụ na-emegharịha ma mee ha ka ha bụrụ "bọtịnụ akpaaka", bụ nke na-eleba anya na ebe nrụọrụ weebụ na ebumnuche nke ịpị ha na ntanetị - water jet ejector design equations.
Ndị nyocha nchekwa weebụ na-akpọ koodu "Mirai". Ọ bụ n'azụ ihe agha a na-atụ anya yandị na-ede blọgụ nchekwa na-akpọ Krebs On Security. Brian Krebs bụ onye ọkachamara nchebe na onye na-ede akwụkwọ blogger. O mere ka mbipụta nkekoodu nke pụtara na hackers 'forum izu gara aga.
Na otu n'ime isiokwu ya, Krebs dọrọ aka ná ntị banyere mmụba nke mwakpo na Internet nkeIhe (IoT) ngwaọrụ. Ndị na-agba ọsọ, ndị na-ahụ maka mwakpo ndị a na-eji ngwaọrụ ndị a iji bombard na ebe nrụọrụ weebụ na-arịọ arịrịọ, na-eme ka okporo ụzọ zuru ezubufee ndị sava. Site na enweghi ike inye ndị ọbịa ha niile ọdịnaya ha chọrọ, ebe nrụọrụ weebụ ahụ kwụsịrị na njedebe.
Ndị omekome ejiwo ọgụ DDoS n'oge gara aga iji kụtuo weebụsaịtị. NaUK bụ mba nke abụọ a na-elekwasị anya na United States. 'DDoS na-ebuso ụfọdụ ígwè ọrụ, sava ma ọ bụ weebụsaịtị. Ha bụ ausoro ma ọ bụ netwọk nke "botnets" nke na-arụkọ ọrụ ọnụ iji rịọ arịrịọ dị mfe na ebe nrụọrụ weebụ..Ha na-arịọ maka ozi n'otu oge nabombard ya ruo n'ókè ọ na-ebugharị ma ghara inwe ike ịrụ ọrụ.
Ọ bụrụ na onye na-egwu ihe nlekota ejiri mee ka ị hụ ngwaọrụ na-adịghị ike nke jikọọ na ịntanetị.Ha nwere ike ijikwa ihe ọma ndị a iji mee ha ka ha nwee ike ịkpọtụrụ ihe nkesa. Onye ọrụ ahụ amaghị ya, na-eme mwakpoiji ngwaọrụ ndị a eme ka mmetụta ya bawanye uru.
N'okwu Krebs, ọgụ DDoS mere ka krebs na saịtị weebụ Nchebe na mkpokọtanke 620 gigabytes nke data site na nke abuo. Ọ bụ karịa ụzọ zuru ezu iji wepụ ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ ugbu a.
Brian Krebs, onye nwe ya, kọrọ na Mirai malware na-agbasa ndị angwaọrụ site na ịwagharị ịntanetị iji chọpụta ngwaọrụ ndị IoT chebere site na ntọala ụlọ ọrụ ndabara, ma ọ bụ aha njirimara na okwuntughe.
Mmalite na onye nwe koodu ahụ ka amaghi. Otú ọ dị, onye ahụmere ka koodu akara jiri aha njirimara "Anna-senpai". Ha na-ekwu na ha anatawo ma nweta akara ọtụtụ puku ngwaọrụ dịka ngwá agha ha.N'okwu nkwupụta dị n'ịntanetị, onye hacker kwuru na ihe eji eme ihe site na ebe nrụọrụ weebụ iji kpochapụ ihe ha mere emeela ka ọ bụrụ na ọ dịirè nke malware. N'agbanyeghị nke ahụ, koodu ahụ ka na-enweta ọtụtụ ngwaọrụ.
Site na Mirai malware, ọtụtụ nde ndị na-enweghị ike ejikọrọ ngwaọrụ dakọrọenweghi ike ichikota ndi mmanye n'aka ma tinye n'ime botnets iji wepu weebụsaịtị. Na nkwurịta okwu na MailOnline, Tony Anscombe nke AvastNche kwuru na ngwaọrụ niile dị ka ihe nwere ike ịnweta maka ndị na-agba ọsọ. Ọ na-eme ka a mata ụdị nke ndị na-emepụta nandị ọrụ ejiri ngwaọrụ ndị a.
Otu n'ime ụzọ kachasị mma ndị ọrụ nwere ike isi chekwaa ngwaọrụ ha bụ ijide ngwaọrụ hakwa ụbọchị ma nọgide na nche maka nkwụsị ọ bụla site n'aka ndị na-ere ákwà. Nke abụọ, ndekọ nchekwa dị na nkọwa na aha njirimara na paswọọdụ, kewapụsite na ndabara ndabara bụ ụzọ dị mma iji chebe ngwaọrụ ndị a. N'ikpeazụ, ndị ọrụ kwesịrị iji ngwaahịa nchekwa ọ bụla, nke dabara nangwaọrụ, nke nwere ike inye aka igbochi mwakpo.